Mexico iyo Japan, waa laba dal oo ay waxyeelo kasoo gaartay dhulgariir | Saadaasha Shabakadda
Taarikada tectonic ayaa sii socota in la ogaado. Laba toddobaad ka hor, dhulgariir xoog leh oo cabirkiisu yahay 8.2 ayaa ku dhuftay Mexico, iyo shalay waxay ahayd mid kale, markan oo cabirkeedu yahay 7.1, oo markale dalka saameysay. Laakiin ma ahan oo keliya Mareykanka inay dhibaatooyin geystaan, laakiin sidoo kale Aasiya, halkaasoo Japan ay dhibbane ugu ahayd mid ka mid ah 6.1.
Dhaqdhaqaaqa dhulku waa wax iska caadi ah meeraha aan ku nool nahay, laakiin markay aad u xoog badan yihiin, cawaaqibka aadamuhu waxay noqon karaan kuwo masiibo wata.
1 Dhulgariir ka dhacay Mexico
1.1 Dareemayaal ma hawlgelin
1.2 Burbur dhacay
2 Dhulgariirkii Japan
Dhulgariir ka dhacay Mexico
Sawir - Muuqaal shaashad ah
Shalay, Sebtember 20, 2017, dhulgariir wuxuu ka dhacay 13.14:20.14 pm saacadda maxalliga ah (100:XNUMX pm waqtiga jasiiradda Isbaanishka), oo xuddun u ah xadka Morelos, oo aad ugu dhow caasimadda (qiyaastii XNUMXkm). Tan awgeed, iyo in kastoo cabirku ka hooseeyay kii hore, waxyeelada intaas ka sii badan.
In ka badan 40 dhisme ayaa dumay, oo ay ku jiraan laba iskuul. Midkoodna, Madaxweynaha Mexico Enrique Peña Nieto ayaa taas xaqiijiyay ugu yaraan 21 carruur ah ayaa dhimatay 30 kalena wali waa la la’yahay. Muwaadiniinta, in kasta oo ay cabsi dareemeen, haddana kama waabanin inay caawiyaan kuwa ka badbaaday kana saaraan burburka.
Dareemayaal ma hawlgelin
Mexico waxay soo martay mid ka mid ah dhulgariirradii ugu darnaa ee 1985. Waqtigaas, qiyaastii 10.000 oo qof ayaa dhimatay. Si looga hortago inay mar kale dhacdo, 19-kii Sebtember kasta dhoolatus lagu daad gureeyo ayaa lagu qabtaa magaalada Mexico City. Si kastaba ha noqotee, laba saacadood baaritaanka ka dib, alaarmiga ma dansan, oo ay sameeyeen laba toddobaad ka hor. Sababta Sababta Waxay ku yaalliin aagagga xeebta, xarunta xuddunta u ahna waxay ahayd Morelos, oo ku taal bartamaha dalka. Marka dhulgariirka lama ogaan karin waqtiga si dadka ay u awoodaan inay gaaraan badbaado.
Waxaa jira waxyeelo dhowr ah oo uu dhulgariirku soo saaray. Iyaga ka mid ah, Ka goynta adeegga nalka (wadar ahaan 3.8 milyan oo qof ayay saameysay), burburka dhismayaasha iyo guryaha iyo gaaska oo daatay. Sidoo kale, 225 qof ayaa naftooda ku waayey, 94 ka mid ah caasimada, 71 Morelos, 43 Puebla, 12 gobolka Mexico, 4 Guerrero iyo 1 Oaxaca.
Japan, wali way soo kabanaysaa kadib marinka Duufaan Talim, uu ku dhacay dhulgariir cabirkiisu yahay 6.1. Dhulgariirku wuxuu dhacay 12.37:281 pm (ET), XNUMX kiiloomitir koonfur bari ee magaalada Kamaishi, ee gobolka Iwate, waqooyi-bari ee dalka.
Waxaa laga duubay in ka badan 320 kiiloomitir bariga magaalada Fukushima, halkaas oo sanadkii 2011 uu ka dhacay shil nukliyeer oo halis ah oo ka dhashay dhulgariirkii iyo Tsunami ku xigtay 11kii Maarso sanadkaas. Nasiib wanaag, ma jiraan wax khasaaro nafeed ah mana jirto digniin tsunami ah oo la soo saaray.
Wadada buuxda ee maqaalka: Saadaasha Shabakadda » Saadaasha Shabakadda » Mexico iyo Japan, waa laba dal oo ay waxyeelo ka soo gaadhay dhulgariir